Maxkamada Maraykanka oo danbiga ku heshay Maxamed Maxamuud • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxkamada Maraykanka oo danbiga ku heshay Maxamed Maxamuud
Maxkamada Maraykanka oo danbiga ku heshay Maxamed Maxamuud
February 1, 2013 - By: Khalid Yusuf
Eedaysanahan ayaa la sheegay inuu bambaano ku qarxin lahaa gudaha dalka Maraykanka.
Maxamed Maxamuud ayaa xabsiga la dhigay sanadkii 2010 kadib markii la sheegay inuu isku dayey inuu Bambaano ku qarxiyo fagaaraha ku yaal bartamaha magaalada Oregon ee gobalka Portland, bishii November ee sanadkii 2010.
Maxamed Maxamuud ayey maxkamadiisa ka socotay dalka Maraykanka todobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo maxkamada ay horyimaadeen markhaatiyaal ka kala socday difaaca iyo dhanka xeer illaalinta Dowlada Maraykanka.
Xubnihii ka hadlay Maxkamada Todobaadkii tagay ayaa waxaa kamid ahaa Aabihii dhalay wiilkan oo sheegay in ciidamada FBI ay khiyaameen oo ay ayagu ahayeen kuwii ka dhaadhiciyey wiilkiisa inuu falkan ku kaco.
Aabaha dhalay eedaysanaha ayaa sheegay in sanadkii 2009 uu isagu la xariiray Sirdoonka Maraykanka ee FBI xiligaasi oo uu ka cabsi qabay wiilkiisa inuu aado dalka Soomaaliya, balse wuxuu sheegay in FBI ay arrintan u adeegsadeen inay wiilkiisa madaxa-ka xadaan (Brainwash) kadibna falkan ku dhiiri geliyaan.
Wuxuu sheegay Aabaha dhalay Maxamed in wiilkiisa isku buuqsanaa xiligii xabsiga la dhigay oo ay ka faa’iideysteen FBI xaaladiisa maskaxeed oo aan degenayn. Wuxuu ku tilmaamay wiilkiisa nin dadka jecel oo aan ahayn qof xaq jir ah.
Dhanka Xeer Illaalinta Maraykanka ayaa soo bandhigay cadeynmo la xariira Maxamed Maxamuud xiriirkii uu la lahaa xubno lagu sheegay Argagaxiso, waxaana lasoo bandhigay cadeynmo sidii uu isugu dayey inuu bambaano ku qarxiyo magaalada Oregon xiliga lagu jiray ciidamada Masiixiyada sanadkii 2010.
Ciidamada Sirdoonka FBI ayaa la sheegay inay xiriir la sameeyeen Maxamed Maxamuud iyagoo iska dhigaya xubno ka socda Al Qaida, isla markaana markii danbe u dhiibay Maxamed bambaano been ah, xili uu isagu doonayey inuu weerarkan fuliyo.
Maxkamada ayaa lagu wadaa inay asbuuca soo socda ku dhawaaqdo xukunka wiilkan waxaana dhici karta in lagu xukumo Xabsi daa’im.